Sawirro: Madaxweynaha Puntland oo soo dhoweyn maqaam sare loogu sameeyay Nairobi - Jowhar Somali news Leader
Home News Sawirro: Madaxweynaha Puntland oo soo dhoweyn maqaam sare loogu sameeyay Nairobi
Sawirro: Madaxweynaha Puntland oo soo dhoweyn maqaam sare loogu sameeyay Nairobi
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni oo shalay gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si weyn loogu soo dhoweeyay, iyadoo soo dhoweynta aheyd mid maqaamkeedu sareysay.
Wafdiga uu hoggaaminayay Madaxweynaha Puntland oo ka soo kicitimay magaalada Boosaaso ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Joma Kenyatta ku soo dhoweeyay Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya, Xildhibaannada Soomaalida ee ku jira Baarlamaanka dalka Kenya.
Soo dhoweynta Madaxweyne Saciid Deni ayaa aheyd mid maqaam sare ah oo hab maamuuskeedu sareysay, waxaana lagu galbiyay gawaarida Ciidamada Booliska oo amnigiisa sugayay, iyadoo ay ka horreeyeen mootooyinka Taraafikada ee horkaca kolonyada madaxda marka ay wadada marayaan.
Diyaar garowga soo dhoweynta Madaxweynaha Puntland ayaa aheyd mid la sii qorsheeyay, marka loo eego habka maamuuska loo sameeyay oo ahaa mid dowladda Kenya la socotay.
Magaalada Nairobi ayaa waxaa ku sugan Madaxweynayaasha saddex ka mid ah Maamul goboleedyada Soomaaliya Puntland, Koofur Galbeed iyo Jubbaland, kuwaasoo si kala gaar gaar ah shalay iyo labo maalin kala gaaray.
booqashada Deni ee Nairobi
Shaqadii Garoonka diyaaradaha Muqdisho oo dib u bilowday
Ra’iisul Wasaaraha magacaaban oo codsi u diray Golaha Shacabka
Gabar aad u yar oo lagu kufsaday Muqdisho